Ngaba uyazi ukusika ilaphu leambrela kwiipaneli?
Landela i-Ovida isambrela sefektri, uya kuyazi ngakumbi inkqubela yeambrela.
Yoshicilelo Screen Yoshicilelo
Namhlanje sineendlela ezininzi zokuprinta kwiambrela.
Ezifana yoshicilelo screen isilika, ushicilelo transfer ubushushu.
Apha ngezantsi ividiyo ye-silk yokuprinta ividiyo ekubhekiswa kuyo.
Kuqala kufuneka silungiselele zonke izinto, ezinje ngesikwere sokubumba sesilika, i-inki, iiphaneli zelaphu.
Okwesibini, siya kulandela iimfuno zokubumba, usebenzisa i-inki ukwenza uyilo luzaliseke.
Abasebenzi besithathu babeka iipaneli zeambrela phezu kwetafile, emva koko elinye icala lenze ukuprintwa kwesilika kwesilika kujoyina. Kule vidiyo ungazibona zonke iinkcukacha ngokucacileyo.
Sivula ukufumana bonke abathengi umbono olungileyo kwiambrela. I-logo yoshicilelo ye-logo iyamangalisa kwaye iyathandwa, iifoto zishicilela isambulela ngokwenene zenza isambrela sikhetheke ngokukodwa.
Sinike ibali lakho leambrela ze logo info@ovidaumbrella.com
Kuqala kufuneka sisike ilaphu eliqengqelekayo libe ngamalungu amancinci aqengqelekayo. Zingaphi iindawo esifanele sizinqumle, ayixhomekeki kuphela kubungakanani beembambo zeambrela, kodwa nakubude belaphu eliqengqelekayo.
Ngokwesiqhelo kukho i-65inch kunye ne-68inch rolling fabric esebenzisa iiambrela. Ke mayenze ukuba isike kumacandelo amancinci ama-2 ukuya kwayi-4.
Njengama-19inch abantwana iambrela sinokusika iindawo ezinamalaphu angama-4small, i-23inch isambulela esiqhelekileyo inokucheba kwii-3ports, ngelixa i-30inch okanye isambrela eselunxwemeni sinokunqunyulwa kuphela kwiindawo ezi-2 okanye ezi-3.
Ngelixa ubungakanani besambrela esenziwe ngokwezifiso sinokusebenzisa ilaphu elenzelwe wena. Ke ukuba uyilo lwakho lunokuba semngciphekweni kwiiambrela ezintsha. Ungasithumela i-imeyile kuinfo@ovidaumbrella.com
Amacandelo amancinci amalaphu kufuneka sitshixe. Kutheni kufuneka sitshixe amalaphu?
Kuba isambrela sophuka ngokulula, ngoko ke kufuneka siyitshixe kakuhle, loo nto yenza isambrela ngokugqibeleleyo.
Ngelixa eJamani kukho itekhnoloji entsha kwimveliso yeambrela, umatshini wesitshixo unokutshixa ilaphu leambrela ngokwakho ngaphandle komgca wesilika. Ke ezinye zeambrela eziphezulu eziphezulu zisenziwa eJamani okanye eJapan. Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi ngomahluko masixeleleinfo@ovidaumbrella.com
Xa ilaphu leambrela litshixiwe, kufuneka sisike kwiiphaneli.
Emva koko siya kungena kwipaneli yokutshixa. Apha kufuneka sithathe iiphaneli nganye zibekwe etafileni yomatshini. Emva koko iipaneli ezimbini zitshixa ngokudibeneyo. Ziyi-6ribs isambrela, 8ribs isambrela, 10ribs isambrela kunye ne-16ribs isambrela. Kodwa sineembambo ezikhethekileyo njengeambrela ye-7ribs, i-9ribs isambrela, i-12rib isambrela kunye ne-24ribs isambrela. Lowo ngumsebenzi omkhulu kubasebenzi. Kodwa ngesiqhelo eyona idumileyo zii-8ribs iiambrela. Emva kwee-8panels ezitshixayo kunye yonke indawo iya kugqitywa. Emva koko kuya kufuneka sivavanye umgangatho wepaneli, jonga ukuba ngaba iphaneli enemingxunya, imigca encinci iyinto enjalo kwizambrela. Ngelixa ungandwendwela umzi-mveliso wethu ukujongainfo@ovidaumbrella.com
Inyathelo lokugqibela lokuvelisa isambrela lihlola umgangatho weambrela ngaphambi kokupakisha.
Oku kufuneka kwenziwe ngesandla, kwaye nganye nganye ihlolwe ukuba isambulela sinokuvula kwaye sivale ngokulula, ukuba kukho imingxunya, ukuthunga okuncinci, iinxalenye ezaphukileyo kunye nento engalunganga kwizambrela. Sinomgangatho wokulawula umgangatho ofanayo ne-AQL 2.5, kuba abanye babathengi bethu bagxila kwiimveliso zeSuper Market, ke sifunda oku kubo ukuphucula umgangatho wethu weambrela. Oko kuluncedo kuthi, ngelixa unezinye iingcebiso kwisambrela usaziseinfo@ovidaumbrella.com
Indibano yesakhelo seambrela
Xiamen Dongfangzhanxin Trading Co., Ltd. mveliso yethu ogama Jinjiang Zhanxin Umbrella Co., Ltd. Oko iambrela ukuvelisa izambrela izakhelo. Apha ngezantsi kukho enye inkqubela phambili esiyibizileyo kwindibano yesakhelo seambrela. Uyazi ukuba maninzi kakhulu amanyathelo okuveliswa kwesakhelo. Kodwa ngapha koko, kufuneka sidibanise onke amalungu esakhelo kunye. Apha sineshafti, intwasahlobo, iimbambo, iinxalenye zesinyithi ext. Uyazi ukuba ayilonyathelo elilula nokuba silufumene uncedo koomatshini. Kwaye ukuba uza kutyelela isambrela mveliso yethu eJinjiang, ndithembe ukuba uyazi ngakumbi ngeambrela. Nxibelelana neqela lethuinfo@ovidaumbrella.com, kwaye usityelele xa ufika eTshayina.
Isambrela soKhuseleko oluNgenawo umoya, Iisambrela zesiko lesiqhelo, Isambrela esisesikweni, Umbrella wemvula, Isambrela esenzelwe wena, Ukusongelwa kwangaphandle,